Ummata Hammarreessaa irratti ajjeechaan suukkanneessaan raawwatame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Ummata Hammarreessaa irratti ajjeechaan suukkanneessaan raawwatame
Ummata Hammarreessaa irratti ajjeechaan suukkanneessaan raawwatame
Miseensonni Poolisii Oromiyaa kanniin ajjeefamanii fi madaayan keessaa tokko
Harar kaampii Hammarreessaatti tarkaanfii gara jabeenyaa woraanni fudhateen ilmaan Oromoo 8 wareegamaniiru. Madoo fi wareegamtoonni hedduun buufata fayyaatti guuramani jiru. Dubartoonni, qeerroo, qarree fi miseensonni poolisii Oromiyaa fi ijoolleenis wareegamanii jiru.
Harargee bahaa Hammarreessatti bifa kanaan dhiiga Oromoo jigsuun kan calqabaati miti. Lammaffaadha. Woraanni fi Jeneraalonni qabeenyaa ummataa saamuu baran ajjeesaa fi ajjeesisaa as gahan. Woyyaaneen dhiiga Oromoo dhiiga sareeti gaditti ilaaluu akkuma itti fuftetti jirti.
Ajjeechaa suukkanenessaa gayeen wolqabatee hanga ammatti ibsi Mootummaan Oromiyaa kenne hin jiru.
Wareegamtootaaf jannata, madoof fayyaa, akkasumas maatii fi firoottani isaaniif rabbiin jajjabina haa laatu!
Previous articleDhDUO’n Jaarmayaalee Oromoo hunda waliin hojjachuuf qophii ta’uu isii ibsite
Next articleHiriirri mormii fi lagannaan gabaa Oromiyaa keessatti bal’inaan geggeeffamaa jira